ADMINISTRATERA DELEGEN’NY JIRAMA : Marobe ireo fanendrena mahabe adihevitra | NewsMada
ADMINISTRATERA DELEGEN’NY JIRAMA : Marobe ireo fanendrena mahabe adihevitra
Par Freenews sur 09/03/2017
Manao tohivakana ny fanoherana anaty fanoherana. Araka ny taratasy nalefa ny 30 janoary 2017 teo, mitondra ny lohateny hoe : « Hafatra ho antsika mpiara-miasa eto amin’ny Jirama », ny Administratera delege vaovao, Rasoloelison Lantoniaina, dia nanendry Tale sy tale lefitra, araka ny dingana manaraka ny tolo-bidy. Nifanindran-dalana tao anatin’izay ihany koa, nisy ny fanendrena mpiasam-panjakana telo, izay notanterahina an-tsokosoko…
Marobe ireo fanendrena mifanohitra sy mahabe adihevitra eo anivon’ny fitantanana ny orinasam-panjakana Jirama ity. Tafiditra amin’izany ny fanendrena mpitantana ambony eo anivon’ity orinasa ity. Misy amin’ireo mpiasa no tsy mahalala izay zava-miseho sy ny fepetra noraisin’ity mpitantana Admnistratera delege vaovao ity. Raha ny taratasy nalefa teo anivon’ny mpiasa ao amin’ity orinasa Jirama ity, ny faramparan’ny volana janoary teo, taorian’ny fanendrena natao azy. Nisy ny fepetra sy fanapahan-kevitra noraisiny, mba hanatanteraka ny iraka izay efa nankinina taminy, amin’ny alalan’ny fanambarana . Anisan’ny fanamby ny hampitovizana ny herijikan’ireo mpiasa rehetra, amin’ny fanendrena ny Tale jeneraly, ny tale jeneraly lefitra sy ireo tale maro isan-karazany, amin’ny alalan’ny antso tolo-bidy. Natao izany mba ho ao anatin’ny mangarahara sy hampirisihina ireo mpiasa handray anjara tanteraka eo amin’ireo toerana ho mpitantana, eo anivon’ity orinasa Jirama ity, raha ny hafatry ny mpitarika vaovao.
Manoloana ny zava-miseho…
Tampotampoka teo anefa, nandiso fanantenana ny zava-nitranga. Ny antony, ny andro manaraka ny famoahana ilay filazana nalefa tamin’ireo mpiasa, nisy ny fepetra tampoka noraisin-dRasoloelison Lantoniaina, ny fanendrena ny DSP na ny (Directeur de la planification stratégique) dia Rakotomanga Fanja Andrianjohary izay ho eo amin’ny toeran-dRandrianarisoa Marcel Désiré. Ity fanendrena nafenimpenina ity dia nampahafantarina ny mpiasa rehetra tamin’ny fanapahan-kevitra laharana faha- N / DG / 17- No. 103 mitondra ny datin ‘ny Janoary 31 janoary 2017.Tsitapitapitr’izay, nisy indray ny fanendrena vaovao nataon’ity mpitantana vaovao ity, anisan’izany ny fanoloana ny Tale jeneraly lefitra eo anivon’ny fitantanana, izay nosoloina an-dRavalisoa Henri. Fanapahan-kevitra nivoaka ny 6 febroary 2017, ary nampahafantarina ny mpiasa tamin’ny alalan’ny fanapahan-kevitra DG/17-N°122.Mbola nisy indray ny fanendrena hafa koa, teo amin’ny toeran’ny DGAE na ny « Direction Général Adjoint Electricité » ny 22 febroary 2017, izay niandraiketan’i Ndalana Nestor Joseph, araka ny fanapahana DG/N°161/2017 . Ireo fanendrena roa voalohany, fantatry ny mpiasa, tamin’ny alalan’ny fanapahan-kevitra, raha tsy nisy nahalala kosa, ny fanendrena ity farany. Manoloana ireo zava-miseho ireo, toa mifanohitra amin’ny taratasy navoaka tamin’ireo mpiasa, ny farany volana janoary lasa teo. Resabe fotsiny, araka izany, ilay taratasy nalefa ary toa tsy manan-kery akory raha ny toe-java-niseho tao anatin’izay fanendrena tsy fantapantatra izay. Telo ireo mpitarika vaovao vao notendrena, saingy mbola mitana ny anjara toerana ho vonjimaika ihany, raha ny fanapahan-kevitra noraisina. Raha ny loharanom-baovao avy amin’ireo mpiasa eo anivon’ity Jirama ity, efa fanao ny fanendrena vonjimaika, mialoha ny tena raikitra.
Telo volana fara fahelany…
Tokana ihany ny fandraisana ny Tale jeneralin’ny Jirama, izay hanaovana antso tolo-bidy, izay hotanterahina ny 25 marsa 2017 izao. Mipetraka ny fanontaniana, nahoana no hanaovana antso tolo-bidy ny Tale jeneraly, saingy ireo telo teo aloha toa natao an-tsokosoko ? Tsy manana ny tena safidiny marina ireo mpiasa sady tsy natao ampahibemaso ny fanatanterahana izany. Ahoana ny mety ho fiaraha-miasan’ny Tale jeneraly vaovao amin’ireo mpiara-miasa aminy, izay mety ho mpisolo toerana ao anatin’ny telo volana monja. Mipetraka ho laharam-pahamehana ve ny nanendrena an-dRasoloelison Lantoniaina, izay mety handao ny toerany afaka roa na telo volana, kanefa nanendry manampahefana telo. Fanontaniana mipetraka, nahoana no nohavaozina ireo mpitantana, raha tsy hiara-kiasa amin’ity ho Tale jeneraly vaovao ity ? Natao hampitoniana ny saim-bahoaka, efa sosotra amin’ny resaka delestazy fotsiny. Porofo mitohoka amin’ny tenda, ny tolotra omen’ny Jirama ny mpanjifa. Ala saritaka sy fameriverezana saim-bahoaka fotsiny ny fanendrena sy ny fanolosoloana eo anivon’ity orinasa ity. Na inona fihetsiketsehana tian-kotanterahina, mitotongana sy miharatsy hatrany ny fomba fiasa omen’ny Jirama ny mpanjifa andro aman’alina…